Twesix ခွေးအတွက်ခွေးများအတွက်ခွေးများကိုကုသရန် --dphg150s-g | Twesix
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အလိုအလျောက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာခြောက်စက်သည် Twsix PET အစားအစာခြောက်သွေ့စက်ကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အတွက်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သန့်ရှင်းခြင်း - စွမ်းအင်ကိုအသုံးမပြုသောဖော်ရွေခြောက်သွေ့သောစနစ်။ Twsix Pet Food Drier သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့မှုကိုခြောက်သွေ့စေရန်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ဖြစ်သည်။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအခြောက်ခံစက်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့သောအစားအစာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုယန္တရားကို သုံး. လတ်ဆတ်စွာထားရှိလိမ့်မည်။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, သန့်ရှင်းလွယ်ကူစေရန်လွယ်ကူပြီးအထိခိုက်မခံသောအစာအိမ်နှင့်အတူအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ မူရင်းဒီဇိုင်း, တစ်ဖက်သတ်တံခါးကို။ Twsix အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာခြောက်စက်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာကိုမီးဖိုသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ကပ်စရာမလိုဘဲခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ Twsix PET အစားအစာခြောက်စက်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာခြောက်သွေ့စေရန်ကြာရှည်ခံ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုအပူစုပ်စက်ခြောက်စက်, ခြောက်သွေ့ခန်းခြောက်ခန်း, ပန်ကာနံရံများ, ပန်ကာနံရံများနှင့်ပန်ကာနံရံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်အပူရှိန်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သောအစားအစာ, အမြန်နှုန်းနှင့်ယိမ့်ချိန်တွင်အငွေ့ပျံစေသောအစက်အပြောက်များကိုစုဆောင်းသည်။ အပူဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်ခြောက်သွေ့သောအခန်းကို အသုံးပြု. အစားအစာများကိုဖုန်မှုန့်များမှရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုသည်။0ိုင်းမှ 12 ယောက်နှင့် 12 ခုရှိသောပန်ကာနံရံသည်လေကိုဖြန့်ဝေပြီးပြောင်းဖူးတိုင်းသို့လေပူများကိုလည်းလွင့်ပစ်နိုင်သည်။
Trolleys များသည်ဗန်းများကိုဖွင့ ်.0န်ထမ်းများတွန်းအားပေးရန်အဆင်ပြေသည်။ အဆိုပါဗန်းကိုအစားအစာဆံ့ဖို့အသုံးပြုကြသည်။
ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက် 5-8 နှစ်
စွမ်းအင်အသုံးမပြုသောဖော်ရွေခြောက်သွေ့သောစနစ်။ Twsix Pet Food Drier သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့မှုကိုခြောက်သွေ့စေရန်ပြီးပြည့်စုံသောစက်ဖြစ်သည်။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာအခြောက်ခံစက်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာခြောက်သွေ့သောအစားအစာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုယန္တရားကို သုံး. လတ်ဆတ်စွာထားရှိလိမ့်မည်။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, သန့်ရှင်းလွယ်ကူစေရန်လွယ်ကူပြီးအထိခိုက်မခံသောအစာအိမ်နှင့်အတူအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ မူရင်းဒီဇိုင်း, နှစ်ဖက်တံခါး။ Twsix အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာခြောက်စက်နှင့်အတူသင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာကိုမီးဖိုသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ကပ်စရာမလိုဘဲခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ Twsix PET အစားအစာခြောက်စက်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာခြောက်သွေ့စေရန်ကြာရှည်ခံ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Tsix အစားအစာခြောက်သွေ့စက်များကိုအမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရတင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်မှတ်များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများရှိသည်
1.Oem သို့မဟုတ် odm လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများသည်စျေးကွက်အတွက်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်အတွက်0န်ဆောင်မှုခံယူရန်အမိန့် / စမ်းသပ်မှုအမိန့်ကိုလက်ခံပါသည်။
3. သင်၏လေးစားမှုရှိသောကုမ္ပဏီအတွက် 24 နာရီ0န်ဆောင်မှုပေးပါ။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီသင့်ထံမှကြားနာရန်နှင့်သင်၏ခန့်မှန်းခြေကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုစတင်ရန်0မ်းသာပါသည်။